Imithetho cargo ezibanzi zezothutho Uzbekistan airways
Ingeniso ka-Uzbekistan ehlabathini kwimakethi ngu ekhatshwe i-eziquqa uphuhliso unxibelelwano networks, kuquka aviation. Central Asia ke, oyena kwetitki Uzbekistan Airways uzama ukwenza ngokupheleleyo usebenzise favorable geopolitical indawo yelizwe ngomhla crossroads ka-emiselwe kwezo ndlela onxulumanisa Europe kunye Emzantsi-Mpuma Asia.
Ababini oyena airports ye-Tashkent kwaye Naoi ingaba indawo esembinbdini yevili airports kuba Uzbekistan Airways. Thina anikele ezibanzi zezothutho ka-cargo kwi-cargo compartments ka-passenger kwiindawo ezingaphelelanga flying kwi rhoqo qho ngonyaka, kwaye umqulu we-flights kulo naliphi na icala kwi Boeing ER cargo aircrafts. Sathi kanjalo kwenziwe ezibanzi zezothutho kwempahla kwi scheduled flights kwi Boeing ER cargo aircrafts ngokusebenzisa Naoi, airport, apho sele evuliweyo yayo doors ukuba loshishino ngo. njengoko i-ngamazwe intermodal lokuthengwa kweenkonzo umbindi ukuqhagamshela engundoqo logistic centers of Europe kwaye e-Asia. Kuba ngokufaneleka shipments e ubutyebi bendalo kangangoko kunokwenzeka ukusebenzisa capacities ngu wadala iqela kuba booking cargoes. Ezinobungozi cargoes ingaba iimveliso okanye * ukuba unako posename ebalulekileyo umngcipheko impilo, ukhuseleko okanye ipropati xa transported yi-emoyeni kwaye apho zahlulwa limiselwe ngumthetho i-IATA kwi lezothutho ka-izinto ezinobungozi.
Umzekelo, ipeyinti, eyomileyo umkhenkce, batteries, automobiles, njl
njl, ingaba regulated njengoko izinto ezinobungozi kuba lezothutho yi-emoyeni. Kuba ukhuseleko zezulu ezibanzi zezothutho, shipper kufuneka uqinisekise ukuba iimveliso okanye * ingaba kakuhle yafumanisa, phawula, packaged, iphawulwe, anombhalo kwaye ibhalwe phantsi ngokungqinelana nomgaqo-ICAO Enzima imiyalelo kwaye IATA DGR. Ngokunxulumene imithetho kwetitki i-booking ka-cargo ngu ekufuneka usetyenzisiwe hayi ngaphambili nje kwe-iintsuku ezili- kwaye zingadlulanga iintsuku ezingama- phambi kokuba wenze isicwangciso departure
Ukwahlulwa Ipropati kwi-wokuqhawula umtshato Attorneys